Mr Programmer (www.mr-programmer.com): ပုဂ္ဂိုလ်ရေး နှင့် ဘာသာရေး များ ကိုရောမွှေကာထား သော အယ်ဒီတာ၏စကားများ..။
ယခုတစ်ပတ်တွင်း ရန်ကုန်မှ စိတ်ဝင် စားဖွယ်ရ...
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး နှင့် ဘာသာရေး များ ကိုရောမွှေကာထား သော ...
What U wanna be ? Singapore PR or Singaporean
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး နှင့် ဘာသာရေး များ ကိုရောမွှေကာထား သော အယ်ဒီတာ၏စကားများ..။
ကျွန်တော် ဒီတစ်ပတ်ရုံးပိတ်ရက်မှာ ရွှေမြန်မာ မဂ္ဂဇင်း ကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖတ်ဖတ်ခြင်းပဲ စပါးလုံးထောက်စရာလေးတွေ တွေ့ခဲ့မိပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်း ရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ်ဆိုသူက သူရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အပြည့်အ၀အသုံးချပြီး ဘာသာရေး နှင့်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး များ ကို ရေးခြင်သလို ကျောင်းဆရာမှ တပည့်များကို ဆုံးမသည့် ပုံစံနှင့် ရေးထားပါတယ်။
သူက ပြောထားသေးတယ်..။ ]]မေတ္တာစိတ်ရှိကြတယ်၊ စိတ်ထားမြင့်မြတ်သိမ်မွေ့ကြ တယ် ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူလူမျိုးတွေရဲ့ တိုင်းပြည်တွေဟာ ဘာလို့ဒီလောက် ဆင်းရဲနေကြတာလဲလို့ တခြားဘာသာဝင်တွေ၊ တခြားလူမျိူးတွေက မေးချင်စရာ တွေဖြစ်လာကြတယ်။ အဲဒါကို ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အနုလုံ ဝေဖန်စဉ်းစားဖို့ လိုနေပြီလို ထင်တယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်မေးမယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစစ်တွေလား။ }}
ဖတ်ကြည့်ကြပါဗျာ။ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်မနေဘူးလား။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ရင်ချမ်းသာရ မယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားက မဟောကြားခဲ့ပါဘူး။
ထပ်မေးထားသေးတယ်... သူက. ]] သစ္စာလေးပါးနဲ့ အနတ္တတရား လောက်မှ ထဲထဲ ၀င်ဝင်နားမလည်းဘဲ ယုံကြည်တယ်လို့ မဖြေပါနဲ့။ ယုံကြည်တယ်လို့ (အရှက်မရှိဘဲ) ဆက်ဖြေနေသေးတယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးဦးမယ်။
ပြသာဒါးတွေ၊ ရက်ရာဇာတွေ၊ ယကြာတွေနဲ့ ဘယ်ဟာကို ပိုယုံကြည်သလားတဲ့။
]]နောက်ထပ်ပြောသေးတယ်။ ဘုရားကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ပေါက်တတ်ကရတွေ (တကယ့်ကို ပေါက်တတ်ကရတွေပါ) လျှောက်လုပ်နေကြတာနဲံ အောင်မြင်ကြရောလား၊ ဘယ်သမိုင်း ဘယ်ရာဇ၀င်မှာမှ အစအဆုံးအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတယ အမှတ်အသားမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်မယုံဘူး }} လုပ်ပြန်ပြီ။
သူမယုံတာနဲ့ဘဲ တဖက်လူတွေကို စော်ကားပြီးပြောပြန်ပြီ။ ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို့ ကျွန်တော်ကို ဗေဒင် အရမ်းယုံတယ်လို့မထင်ပါနဲ့၊ မယုံဘူးလို့လဲ မထင်ပါနဲ့။
ဒါပေမယ့် အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ဗေဒင်ပညာဆိုတာ မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်ကတည်းကရှိခဲ့လို့ ပုဏားတွေတောင် ဟောခဲ့သေးတာပဲ။
ဒါပေမယ့်ဗျာ ငါ့ အယ်ဒီတာချုပ်ကွ ငါမကျေနပ်ရင် ငါကြိုက်သလိုရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ရေးတာကတော့ စာအုပ်တန်ဖိုး၊ သူရဲ့ ဒေါက်တာဆိုတဲ့ တန်ဖိုးကြီး ကိုအရင် ဂရုစိုက် ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူရေးထားတာတွေ ဖတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် တင် ပေးထားပါတယ်။
Posted by Mr. Programmer at 2/17/2007 01:24:00 PM
Labels: Essay, Feeling
နောက်ဆိုရင် အဲလို မဂ္ဂဇင်းမျိုးမဖတ်ဖိုပ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်
2:50 AM GMT+8